Ingxaki ngeWebhu 3.0 iyaqhubeka | Martech Zone
Ukwahlulahlula ngokwamacandelo, ukuhluza, ukumakisha, ukuqokelela, ukubuza imibuzo, ukwenza isalathiso, ukuhlela, ukufomatha, ukuqaqambisa, ukunxibelelana, ukulandela, ukudibanisa, ukuthanda, ukuthumela i-tweeting, ukukhangela, ukwabelana, ukubeka amanqaku, ukumba, ukukhubeka, ukuhlela, ukudibanisa, ukulandela umkhondo, ukwaba… kubuhlungu.
I-0 yeWebhuNgo-1989 uTim Berners-Lee we-CERN ucebisa ukuba kuvulwe i-Intanethi. Iwebhusayithi yokuqala ivela ngo-1991 ngeProjekthi yeWebhu yeWebhu yeHlabathi.
I-1.0 yeWebhuNgo-1999 kukho izigidi ezi-3 zewebhusayithi kunye nabasebenzisi abahamba ngokuyintloko ngegama-lomlomo kunye nezikhombisi ezinje ngeYahoo!
I-2.0 yeWebhuNgo-2006 kukho iindawo ezingama-85 ezigidi kodwa iindawo zokunxibelelana, ii-wikis kunye namajelo eendaba ezentlalo aqala ukubonakala apho abasebenzisi banokuthatha inxaxheba kuphuhliso lomxholo.
I-3.0 yeWebhu: Ngo-2014, ngaphezulu kweebhiliyoni zewebhusayithi zikhona kunye nophando olukrelekrele kunye neenkqubo zonxibelelwano, ikakhulu ngenxa yokuba zilungelelaniswe ngokufanelekileyo kwaye ziphawulwe kubuchwephesha kubathengi, isalathiso, kunye nokufumana ulwazi kubasebenzisi.
I-4.0 yeWebhuSingena kwisigaba esilandelayo se-Intanethi apho yonke into idityaniswe khona, iisistim zokuzifundela, iimfuno zenzelwe umntu kwaye zilungiselelwe, kwaye iwebhu iyalukwa kubomi bethu kanye njengakwabiwa kwamandla ngaphezulu kwenkulungwane eyadlulayo.
Ndiqikelele ukuba u-2010 iyakuba ngunyaka we ukuhluza, ukwenza ubuqu, kunye nokwenza ngcono. Namhlanje, andiqinisekanga ukuba sisondele kakhulu-sinokuba sineminyaka yokuphumla. Eyona nto iphambili kukuba siyayidinga ngoku, nangona. Ingxolo sele ivala.
Inkqubo yentengiso, ubukrelekrele bokwenza, kunye nokufunda ngomatshini konke kusasazwa efini ukuzama ukuphucula ukubaluleka kunye nokujolisa kunxibelelwano. Eyona nto ibalulekileyo yile yokuba bonke obu buchwephesha buthunyelwe yimibutho ukulawula unxibelelwano kumsebenzisi wokugqibela. Oku kubuyela umva ngokupheleleyo… sidinga iinkqubo apho umsebenzisi anokulawula ngokulula ulwazi abondliwayo kunye nendlela abalondliwa ngayo.
UGoogle uneminyaka engama-20 ubudala kwaye usengu-a injini yokukhangela, Kukubonelela kuphela ngesidenge sedatha esalathiswe kumagama aphambili ahambelana nemibuzo yakho. Ndingathanda ngokwenene umntu ukuba akhe i khangela injini elandelayo… ndidiniwe kukukhangela, andithi? Ngethemba, ukwamkelwa ngobuninzi betekhnoloji yelizwi izakuqhuba izinto ezintsha kule nkundla- andicingi ukuba abathengi baya kuba nesineke kakhulu xa bejikeleza kwiziphumo ezininzi ukufumana leyo bayifunayo.
Iinkampani ezinje ngeFirefox, uGoogle, kunye noApple banokunceda. Ngu ukusilela Ukulandela umkhondo wentengiso kukhubazekile kufakelo, lubeka uxanduva ezandleni zomsebenzisi. Njengomthengisi, kunokuvakala njengamandongomane kum ukuba ndifuna ukuba abathengi kunye namashishini bayeke ukundimamela. Kodwa ukuba andinamsebenzi kwaye ndiyacaphukisa, yile nto kanye ekufuneka beyenzile. Abathengisi bahlala behlala bethumela umyalezo kuwo wonke umntu kwaye emva koko bahlule kwaye bacoce umyalezo.
I-GDPR inokunceda. Andinalwazi lokuba yayiyintoni impembelelo GDPR yokuqala imiyalezo yokungena kwiinkampani, kodwa ndinoluvo lokuba ibibuhlungu. Ngelixa ndikholelwa ukuba yayinzima, iya kwenza abathengisi abangcono kuthi. Ukuba besikhathazeke ngokwenyani ngayo yonke imiyalezo ebesiyithumela, ngexa besiyithumela, kunye nexabiso elilethweyo kwithemba ngalinye okanye kumthengi- ndiqinisekile ukuba singathumela iqhezu labo. Kwaye ukuba abathengi bebengabhobokiswa, abanako ukutyhala umthetho onzima ngolu hlobo.
Ndicinga ukuba iinkampani zetekhnoloji ezimameleyo kunye nokunyanga amathemba kunye nabathengi ngentlonipho ebafaneleyo, ukuqinisekisa ixabiso ngonxibelelwano, ekugqibeleni baya kuba ngabaphumeleleyo kwiWebhu 3.0. Ngaphandle koko, singena kwi-Web 4.0 (kwi-Intanethi yezinto) ngaphandle komnatha wokhuseleko.
tags: ukudibanisauphawu lokubhukishaUkuhlelwa ngokwamacandeloukuqokelelaukumbaUkucocaokulandelayofomatiukuqaqambisaisalathisokuthandazokunxibelelanaukubuzaKu khangelaiwebhu yesemanticukwabelanaukukhethaulwakhiwokhubekaukumakishatweeting3 web3.0 web
Yeyiphi eyona Rhoqo yokuThumela imiyalezo ngokuBhaliweyo?
Meyi 11, 2010 kwi-5: 55 AM
Ndizame ukukwakhela injini yokufumana. Endaweni yokuxhomekeka kwiikhompyuter ukucoca idatha engacwangciswanga efanelekileyo kuwe, injini yokufumana ixhomekeke kwinethiwekhi yakho yoluntu.
Ukugqithiswa kwegama elingundoqo kudale i-monster yaseFrankenstein yobunzima. Ngoku akwanelanga ukuba ishishini elincinci libe newebhusayithi, kufuneka babe nesakhiwo sengcali ye-SEO umxholo wabo kunye nemethadatha ukukholisa i-algorithms yeGoogle. Yimpambano le.
Ngethemba ukuba itekhnoloji yeXesha eliLungileyo kubandakanya neyam iya kukunceda * ufumane * into oyifunayo, xa uyifuna kwaye sinokubaleka igama eliphambili esihogweni.
Phendula ukuba ufuna ukwazi ngakumbi. Andifuni kukuthumela spam ngegama lenkampani yam okanye iwebhusayithi. Konke malunga "nokungena".
Meyi 11, 2010 kwi-9: 43 AM
Andikholelwa ukuba awukhange undinike nesicatshulwa 😉
Meyi 11, 2010 kwi-4: 32 PM
Ngaba ukhe weva ngoWolfram Alpha? (http://www.wolframalpha.com/) Leyo “yinjini yokufumana.”
Meyi 13, 2010 kwi-7: 48 AM
Molo Cassie! Ndicinga ukuba iWolfram ngokuqinisekileyo linyathelo eliya kwicala elifanelekileyo!
Andivumi kwaphela. Ewe, idatha iyoyikeka ukuba usebenzisa iindlela zobalo zemveli kwiingxaki zesemantic. UGoogle uyakwenza oku - okukhokelela kumsila omde omangalisayo weziphumo kunye nabasebenzisi abadanileyo.
Iinkalo ezivelayo ze-adaptive heuristics zisebenza kakhulu kwisemantics kunokuba kuxoxwe kwividiyo.
Okuninzi ekufuneka sikulandele… Siyayilungisa ngoku.